စိတ်ထားမြင့်သူ …တက္ကစီ ဆရာကို …ဂုဏ်ပြုလိုက်ရအောင် – ရှအေလငျး
ပတ် စ ပို့စ် မှတ်ပုံတင် ပျောက်ရင် အရမ်းခက်ခဲတယ်ဆိုတာ သိတဲ့ စိတ်ထားမြင့်သူ တက္ကစီ ဆရာကို ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်…
ဒီ ကား နံပါတ်​ ပိုင်ရှင် အစ်ကို့ကို ဂုဏ်ပြုပေးကြပါ
ညီမရဲ့ ပတ်​စပိုစ်​နဲ့ ဒေါ်လာအချို့ ကားငှားစီးရင်း ကား​ပေါ်ပါသွားတာပါ…
ကားဆရာ အစ်ကိုမှ ကားပေါ်မှာတွေ့ပြီး အိမ်တိုင်ယာရောက် လာပြန်ပို့ပေးသွားပါတယ်​…
ညီမ အိမ်​ကိုလဲမှတ်​မိလို့ ကံကောင်းသွားတာပါ
ကိုယ်​ က လဲ မနက်​ ၈နာရီခွဲ​လေယာဉ်​နဲ့ ပြည်ပ ခရီးသွားရမှာ​ဖြစ်လို့…
အ ကယ် ၍ ဒီအစ်ကိုသာ ပြန်လာမပေးခဲ့ရင် ပိုက်ဆံတွေ အချိန်တွေ အခွင့်ရေးတွေ ဆုံးရှုံးရမှာပါ…
​ကျေး ဇူး အရမ်းတင်​ပါတယ်…
ချစ်​ သယ် ချင်း တို့ ရေ ဒီလိုဂုဏ်ပြုထိုက်သူကို ၀ိုင်း Share ပြီးဂုဏ်​ပြု​ပေးလိုက်​ကြပါ
အ ကို ကြီး ကျန်​မာပါ​စေချမ်းသာပါ​စေ…
အမိမြန်​မာပြည်​နဲ့ ချစ်​ရတဲ့သူအားလုံးကို ခေတ္တနှုတ်​ဆက်​ပါတယ်​.. Bye Bye
မ​နေ့ကပတ်​စပိုစ့် ​လာ​ပြန်​​ပေးသွားတဲ့ အကို​ရေ
ပတျ စ ပို့ဈ မှတျပုံတငျ ပြောကျရငျ အရမျးခကျခဲတယျဆိုတာ သိတဲ့ စိတျထားမွငျ့သူ တက်ကစီ ဆရာကို ဂုဏျပွုလိုကျပါတယျ…
ဒီ ကား နံပါတျ ပိုငျရှငျ အဈကို့ကို ဂုဏျပွုပေးကွပါ
ညီမရဲ့ ပတျစပိုဈနဲ့ ဒျေါလာအခြို့ ကားငှားစီးရငျး ကားပျေါပါသှားတာပါ…
ကားဆရာ အဈကိုမှ ကားပျေါမှာတှပွေီ့း အိမျတိုငျယာရောကျ လာပွနျပို့ပေးသှားပါတယျ…
ညီမ အိမျကိုလဲမှတျမိလို့ ကံကောငျးသှားတာပါ
ကိုယျ က လဲ မနကျ ၈နာရီခှဲလယောဉျနဲ့ ပွညျပ ခရီးသှားရမှာဖွဈလို့…
အ ကယျ ၍ ဒီအဈကိုသာ ပွနျလာမပေးခဲ့ရငျ ပိုကျဆံတှေ အခြိနျတှေ အခှငျ့ရေးတှေ ဆုံးရှုံးရမှာပါ…
ကြေး ဇူး အရမျးတငျပါတယျ…
ခဈြ သယျ ခငျြး တို့ ရေ ဒီလိုဂုဏျပွုထိုကျသူကို ဝိုငျး Share ပွီးဂုဏျပွုပေးလိုကျကွပါ
အ ကို ကွီး ကနျြမာပါစခေမျြးသာပါစေ…
အမိမွနျမာပွညျနဲ့ ခဈြရတဲ့သူအားလုံးကို ခတ်ေတနှုတျဆကျပါတယျ.. Bye Bye
မနကေ့ပတျစပိုဈ့ လာပွနျပေးသှားတဲ့ အကိုရေ
“မွေးနေ့အမှတ်တရအဖြစ်…. ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းကို…. ငွေကျပ်သိန်း ၁၀၀ လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူကျော်သိန်း 👍”
အထိမခံတဲ့ ….တစ်သျှူးငှက်ပျောနောက်ကွယ်က…. ပျောက်ဆုံးနေသော ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ
အားလုံး သတိရှိကြပါ !!! အဝါရောင်အဆင့်
နိုင်ငံပေါင်း(16) နိုင်ငံ ရတနာသုံးပါးနဲ့ တွေ့ ကြပြီ…
ကမ္ဘာ့ သက်တမ်းအရင့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သော ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ကြွင်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်တွေ့ရှိ